laydh dabiici ah, laydh dabiici ah, fiilo LED ah oo laydh dhalaalaya
Hadda waxa jira laba nooc oo asaas ah oo ah qalabyada nalalka adag-gobolka: LED, OLED. Halbeegyada hadda jira aad ayay u yar yihiin (qiyaastii hal milimitir laba jibbaaran) waxayna aad u iftiimayaan. Ka dib markii la sameeyay sannado 25 ka hor OLEDs, LEDs ayaa horay looga shaqeeyay noocyo kala duwan oo nalalka, sida gaadiidka ...
Macaamiisha Qaaliga ah ee Qiimaha Leh, Alaab-qeybiyeyaasha, iyo Wada-hawlgalayaasha Ganacsi; Laga bilaabo 2-da Juun 2018, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno inaan u beddeleyno magaca shirkadeena: LongNor Optoelectronics Co., Xaddidan Magaceena cusub wuxuu ka tarjumayaa joogitaankeenna caalamiga oo ah qayb buuxda oo LongNor Optoelectronics Co., ...
Inkastoo cuntadeenu rabto in korantada korontada ay sii korodho, haddana wacyi-gelinta aannu u baahannahay si aan u kordhino waxtarka. Mid ka mid ah ganacsiyadii ganacsiga oo dhan ma awoodi kari waayeen tamarta korontada oo keliya, laakiin hubi in deegaanku ka faa'iideysto, waa iyada oo loo marayo badalida hargabka ...
Nalalka Calaamadda iftiinka (LED) waa qalab yar oo qalabka korontada ku shaqeeya oo kor u qaadaya koronto. Nalalka iftiinka LED wuxuu ku yaalaa tan iyo 1960s, laakiin hada wuxuu bilaabanayaa in uu ka muuqdo suuqa degaanka ee iftiinka bannaan. Marka hore LEDs cad ayaa suurtogal ah oo kaliya "kooxo" roobab "seddexda LED - dib u ...
150 lumen per watt Led Tube lights - Ma aha in ay jiraan wax khalad ah oo leh nalalka sodium-dheecaanka qubeyska. Waxyaabaha ay ku shaqeeyaan nalalkooda oo dhan ayeey u socdaan wiqiga meel u dhow dareenka ugu sareeya ee isha aadanaha waxay siiyeen waxqabad aad u iftiimin leh oo ah 200 lumens per watt oo korontada la isticmaalo, inkastoo ...
Dhammaan alaabooyinka naga leh shahaadada UL, CE iyo ROHS
Taariikhda: 01 / 11 / 2016
Macaamiisha Qaaliga ah, UL waxay ku taxan yihiin Nalalka Led - Iyadoo la tixgelinayo kororka joogtada ah ee dalabka ka imanaya suuqa Yurub iyo USA iyo tilmaamaha cusub ee Yurub ee ku saabsan beddelka iftiinka iftiinka, halgoen iyo nalalka dhaadheer ee nalalka LED-ka ee tamarta badbaadiya, waxaan codsannay UL, CE iyo RoHS dhammaan p ...
Led Flood Light, Globally iyo Local, qof kastaa wuxuu doonayaa inuu yareeyo saamaynta deegaanka iyo inuu sameeyo go'aammo dhaqaale oo qumman. Laakiin warshadaynta iftiinka ayaa naga siisay fursad aan ku guuleysaneyno: dooro sharoobooyinka aan fiicnayn ama kuwa dufanka leh ee ku jira meerkuri. Nasiib wanaag, maba sii aheyn inaan tixgelino ...